ပုံသေ ၀ င်ငွေ ၂ - အမြတ်မရှိသောကမ္ဘာတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၀ င်ငွေအခွင့်အလမ်းများရှာဖွေခြင်း - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ပုံသေ ၀ င်ငွေ ၂ - အမြတ်မရှိသောကမ္ဘာတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၀ င်ငွေအခွင့်အလမ်းများရှာဖွေခြင်း
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 22, 2020 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 21, 2020 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ 401k အတိုင်ပင်ခံ Fiduciary ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အသားပေးသတင်းများ, ဝိရောဓိ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးလာစေရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော FX2 ဖြင့်ယနေ့ဘဝ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုတည်ဆောက်ပါ။
တစ် ဦး တည်းငွေသားထုတ်လုပ်မှုအတွက် 6% ကျော်
နှစ်စဉ်တစ်သက်တာ 8.72% ပြန်လာ
Durig ၏မြင့်မားသောအလျှော့ပေးလိုက်လျော၏လစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ် Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် အရာကိုလည်းအစုစုကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှပေးနိုငျသောအများအပြားအကျိုးကျေးဇူးများစူးစမ်း။
ကျော် တစ် ဦး တည်းငွေသားထုတ်လုပ်မှုအတွက် 6%
တစ်နှစ် -to-date ဖြစ်အောင်ပြန်လာ 6.20%
၏ 1 တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 7.72%
၏3တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 9.03%
၏5တစ်နှစ်ပြန်လာ Trailing 9.13%
၏ပျမ်းမျှဘွန်းရင့်ကျက်4နှစ်များ
အာလဖ 10.58 (vs. Benchmark)*
၏ Beta ကို -1.22 (vs. Benchmark)*
ပိုလျှံပြန်လာ၏ 4.32% (vs. Benchmark)*
Durig ရဲ့ Fixed ဝင်ငွေ2(FX2) မြင့်မားသောဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲဝင်ငွေခွန်အစုစု အထူးရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည် ကြီးမားသောကွဲပြားခြားနားသောပြည်တွင်းထုတ်ထုတ်ကုန်များမှတဆင့်သင်ပိုမိုဝင်ငွေရရှိသည်မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းကော်ပိုရိတ်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်။ ဤရွေ့ကားခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အရှည်မှာပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည် ရေ, ငါတို့သက်သေပြရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောင်မြင်ပြီးမှသာလျှင်အစုစုအတွက်ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အစုစုတွင်ကိုင်ထားသောငွေချေးစာချုပ်များကိုမကြာခဏကန့်သတ်ထားသည်သူတို့ရဲ့စီစဉ်ထားရင့်ကျက်နေ့စွဲနှင့်ပတ်သက်။ အတူ), နှောင်ကြိုးအကျိုးစီးပွားအတော်လေးတည်ငြိမ်ငွေပေးချေမှုညီမျှ (ဆိုလိုသည်မှာ ဝင်ငွေ).
တကယ်တော့, ထဲမှာပါရှိသောခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် FX2 ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် ငွေချေးစာချုပ်အတိုးတစ်ခုတည်းမှငွေသားထုတ်ယူမှု ၆% ကျော်ကိုကောင်းစွာထုတ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်လျှော့စျေးဖြင့် ၀ ယ်ထားသောငွေချေးစာချုပ်များကိုမူလတန်ဖိုးဖြင့်ရွေးနှုတ်သည်နှင့်အမျှအစုစုမှရရှိသော ၀ င်ငွေ ၆% ကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုအတွက်အလားအလာရှိသောအကျိုးကျေးဇူးမှာ ပို၍ ပင်သိသာထင်ရှားလာသည်။ ဤအကျိုးကျေးဇူးများသည်နှစ်များတစ်လျှောက်စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေတိုးပွားလာစေသည်.
ယနေ့ဘဝ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုတည်ဆောက်ပါ FX2, သင်ပိုမိုဝင်ငွေရရှိရန်အထူးဒီဇိုင်း!
အစုစု၏ဝင်ငွေကောင်းသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှကြီးထွားရန်အလားအလာကောင်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ ရေ ယုံကြည်တယ် Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် ရန်ရှာကြံသောသူတို့အားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထို့အပြင်စေသည် ဘ ၀ ၏အဆင့်အားလုံးတွင် ၀ င်ငွေတိုးပွားလာခြင်းပင်ဖြစ်သည်.
ရေရှည်တွင် FX2 အစုစု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို သူ့ဟာသူအမှန်တကယ်သီးခြားစီ။ မြင့်မားသောအထွက်နှုန်း, အစုစုကိုဖမ်းယူရှိသည်သောပုံသေဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများ အားလုံးနီးပါးပြန်လာကာလအတွက် FX2 outperforming ခဲ့သည်ရှိပြီးဖြစ်သော၎င်း၏သမိုင်းဝင်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထင်ဟပ် YTD၊ Trailing-3 Year, Trailing-5 Year နှင့်နှစ်စဉ်တစ်သက်တာပြန်လာသည့်ကာလများတွင် ၄.၄%၊ ၄.၄၅%၊ ၄.၄၇% နှင့် ၃.၃၈% တို့ဖြင့်အနီးကပ်ဆုံးရွယ်တူချင်းများထက်ကျော်လွန်အသီးသီး (သင့်အဆင်ပြေမှုအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်).
ရေရှည် ၀ င်ငွေရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်မျှော်လင့်သည် ဝင်ငွေပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့် generateနှင့်ပင် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတိုး, အ Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက် Durig ၏လက်ရှိဝင်ငွေဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူချောမွေ့စွာပေါင်းစပ်!
FX2 နောက်ထပ်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုပေးနိုင်သည် (င။ တိုးတက်မှုအစုစုကိုအမျိုးမျိုးDurig ရဲ့များစွာသော၌ကျင်းပသောကဲ့သို့သောအခြားပိုင်ဆိုင်မှုမဟာဗျူဟာသို့မဟုတ်ဆက်စပ်မှုမဟုတ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ) အောင်မြင်သောအပြာရောင် Chip Dividend Portfoliosထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, S & P ၏ခွေးများ, ပြီးနောက် မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။
အဘယ်ကြောင့်တန်ဖိုးနည်း, တစ် ဦး ချင်းစီစီမံခန့်ခွဲအကောင့်များ?
သီးခြားစီမံခန့်ခွဲထားသောငွေစာရင်းများသည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်၎င်းတို့၏ဝင်ငွေပန်းတိုင်များသို့ပိုမိုနီးကပ်စေသည်။ အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေဖွဲ့စည်းပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားပိုမိုတိကျသောအခွန်သက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြခြင်းမပြုရ။
နှစ်တွေ ရေ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တာ ၀ န်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊နှင့်မကြာခဏတစ်သက်တာယုံကြည်မှုအတွက်စတင်ခဲ့ကြောင်း) ဆက်ဆံရေး။ အဖြစ် ဝိရောဓိ, Durig မှတာဝန်နှင့်အခွင့်ထူးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဂုဏ်ယူသည် အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားပြုမူ.
သင့်ကိုအမှန်တကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေခံအရသိရန်အချိန်ယူရသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပညာရှင်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုယနေ့အချိန်တွင်ဖိအားပေးတိုက်တွန်းထားသည်။ဒါမှမဟုတ်သင့်မိသားစုရဲ့) သာယာဝပြောရေး / အနာဂတ်ဘဏ္goalsာရေးရည်မှန်းချက်များ။ ကြီးမားသောဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်တွေ့မြင်ရသည့်မှားယွင်းသောအသွင်အပြင်များကိုကျော်ပြီး sup-par service ကိုကျော်။ ခြားနားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါ ရေဘယ်မှာလဲသင်၏အကျိုးစီးပွားကို ဦး စားထားပါ။"
တိုတောင်းသောပျမ်းမျှရင့်ကျက်မှု (ထက်နည်း4နှစ်) တွင် FX2 လျှော့ချရန်ကူညီပေးသည် အတိုးနှုန်းအန္တရာယ်၏သက်ရောက်မှု နှင့်ဆက်စပ် မတည်ငြိမ်မှု, အစီစဉ်ထားနှောင်ကြိုးအတိုးငွေပေးချေမှုနှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ reinvested အထူးသဖြင့်အခါ) ကူညီပေးနေ အတိုးဝင်ငွေတိုးနှင့်သိသိသာသာစုစုပေါင်းအစုစုကိုပြန်လာမြှင့်တင်ရန်.
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အစုရှယ်ယာတွင်ရှိသည့်ငွေချေးစာချုပ်များ၏ပျမ်းမျှရင့်ကျက်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိုးနှုန်းများ၊ စည်းမျဉ်းအသစ်များသို့မဟုတ်အခြား၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ။
နှောင်ကြိုးသက်တမ်းကိုလေးနှစ်အောက်တွင်ထားခြင်းအားဖြင့်၊ ရေ ၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အစုစုကိုနေရာချထားခြင်းနှင့်ရေရှည်ပုံသေ ၀ င်ငွေ ၀ န်ဆောင်မှုများထက်ပိုမိုကျဆင်းခြင်းကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
နောက်ဆုံးသတင်းများရယူရန် FX2 နှင့်ပိုမိုသိရှိရန်မှတ်ပုံတင်ပါ။
အဆိုပါအစုစုရဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စဉ်းစား ၀ င်ငွေထုတ်လုပ်မှု ၆% ကျော်နှင့်ကြီးထွားရန်အလားအလာကောင်းသည်, Durig က၎င်း၏ယုံကြည်သည် Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၀ င်ငွေမြင့်မားသော ၀ င်ငွေရှာဖွေသူများအတွက်အံ့သြစရာကောင်းသောအရာဖြစ်သည်!
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ယခင်ကဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်အထွက်နှုန်းနှင့် ၀ င်ငွေကိုအချည်းနှီးရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ရာအတိတ်ကာလ ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင်လေ့ကျင့်လာကြပြီးအချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာမည့်အလားအလာနှင့်အတူ ထပ်မံ၍ မြင့်မားသောဝင်ငွေရရှိရန်အလိုရှိကြသည်။ Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် တစ်ခုသိသာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Durig တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးနည်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဂုဏ်ယူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်သေးငယ်သော်လည်းကုန်ကျစရိတ်များကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံအမြတ်အစွန်းများများ ပေး၍ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းလိုပဲ သင်၏အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သောမန်နေဂျာများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ၀ င်ငွေလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်ထားသည့်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါ.
မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ ရေ ယနေ့!
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထူးချွန်သည့်ဝင်ငွေဖြေရှင်းနည်းများကို ကျေးဇူးပြု၍ ခေါ်ပါ ရေ at (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
ဥရောပ Dividend မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်
စွန့်စားမှုခွငဖြေ - ဒီပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှာပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကြံပြုချက်အဖြစ်မယုံကြည်သင့်ဘူး၊ မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြုလုပ်သည်ကိုအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ရန်သင့်တာ ၀ န်ရှိသည်။ စွန့်စားမှုအရင်းအနှီးဖြင့်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာဆုံးရှုံးသွားလျှင်သင့်ဘဝပုံစံနှင့်သင်၏ဘဏ္lifestyleာရေးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေမည့်ငွေဖြင့်ဖြစ်သည်။ အတိတ်ရလဒ်များသည်အနာဂတ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမျှဤစာပေးစာယူအကြောင်းအရာကိုတိတိကျကျသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကတိသို့မဟုတ်အာမခံချက်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသင့်သည်။ ဤဆောင်းပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Durig Capital သည်တာဝန်မရှိပါ သတင်းအချက်အလက်ကိုအာမခံချက်မရှိပါ။ အနာဂတ်အခြေအနေများ၏စီမံကိန်းကိုကြိုးစားသောအခါမည်သည့်အမျိုးအစားအာမခံချက်ကိုဆိုလိုခြင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဖွင့်လှစ်ခြင်း: * အသုံးပြုခဲ့သည့်အခြေခံစံနှုန်း BBG Barc US Agg Bond Indx TR USD *
2019 2020 alpha အမေရိကတိုက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း အခြေခံစံနှုန်း အခြေခံစံနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည် beta ကို အပြာရောင်ချစ်ပ် နှောင်ကြိုးစျေးကွက် ငွေချေးစာချုပ်များ ကေနဒါ အများပိုင်သတင်း ကော်ပိုရိတ် ကူပွန် ခရက်ဒစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ လျှော့စျေး အဆိုပါ DOW ၏ခွေးများ နိုင်ငံတွင်း ရေ Durig Capital ကို Durig Fixed ဝင်ငွေ durig.com ဖေဖေါ်ဝါရီလ ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Fixed ဝင်ငွေခွန် Fixed ဝင်ငွေ2Fixed ဝင်ငွေခွန်2စီမံခန့်ခွဲဝင်ငွေခွန်အစုစု ပုံသေဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Fixed ဝင်ငွေအစုစု FX2 FX2 အစုစု FX2 မဟာဗျူဟာ မြင့်မားသည် ဝငျငှေ Informa သတင်းအချက်အလက် စိတ်ဝင်စားမှု အတိုးနှုန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ Junk bonds စာရင်း ဝင်ငွေစီမံသည် မနက်ခင်း မြောက်အမေရိက အခွင့်အရေး performance စွမ်းဆောင်ရည်ပြန်လည်သုံးသပ် အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ စြေးထား မှုနှုန်း သုတေသန ပြန်လည်သုံးသပ် မြင့်တက်နှုန်းထားများ ရင့်ကျက်မှုတို ကာလတို ရေတိုငွေချေးစာချုပ်များ ကာလတိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ SP500 စတော့ရှယ်ယာ မဟာဗျူဟာ ထိပ်တန်းအဆင့် အဆင့်သတ်မှတ်မထား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အသားပေး
Charlie Sheen - သူ၏ဘဝပုံစံနှင့် Net Worth